Lowo owayenguNgqongqoshe Wezangaphandle wase-US uColin Powell ushone ngenxa ye-COVID-19 eneminyaka engama-84
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Abantu » Lowo owayenguNgqongqoshe Wezangaphandle wase-US uColin Powell ushone ngenxa ye-COVID-19 eneminyaka engama-84
Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Izindaba zikaHulumeni • Health News • Izindaba • Abantu • Ezokuvakasha • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje • I-USA Izindaba Ezintsha
Lowo owayenguNgqongqoshe Wezangaphandle wase-US uColin Powell ushone ngenxa ye-COVID-19 eneminyaka engama-84.
UPowell wadumala ngokuya kweqembu lakhe kwesokudla waze wasekela obala uBarack Obama emzameni wakhe wokuba ngumengameli. UPowell uphinde wavuma ukuthi uJoe Biden uzongenela ukhetho lokuhola izwe, wathi uzoba “ngumongameli sonke esizoziqhenya ngokushayela indesheni.”
UColin Powell owayengunobhala wezinkanyezi ezine osethathe umhlalaphansi nowayengunobhala wezwe waseMelika, ushonile ngenxa yezinkinga ebezivela ku-COVID-19.
UColin Powell ubelokhu ethola ukwelashwa eWalter Reed National Medical Center.
UColin Powell utholakale ene-multiple myeloma.
UColin Powell, oyiRepublican evelele, owayengumuntu wokuqala wase-Afrika waseMelika ukukhonza njengo UNobhala Wezwe wase-US, ushone eneminyaka engama-84, ngenxa yezinkinga ezivela ku-COVID-19.
Umakadebona weminyaka engu-35 webutho lase-US, owanyukela esikhundleni sokuba yinkanyezi yezinkanyezi ezine ngaphambi kokungena kwezepolitiki, ubelokhu ethola ukwelashwa eWalter Reed National Medical Center, lapho esedlulile emhlabeni, umndeni wakhe umemezele namuhla eposini ikhasi lakhe kuFacebook.
“Silahlekelwe ngumyeni, ubaba, umkhulu kanye nomuntu odumile waseMelika,” kusho bona, bangeze nokuthi wayegonywe ngokuphelele nge-COVID-19, kodwa ekugcineni kwathatha impilo yakhe.
Umndeni kaPowell ubonge abasebenzi bezokwelapha “ngokunakekela kwabo okunakekelayo.” Imbangela yokufa kuthiwa "yizinkinga ezivela ku-COVID-19." Udlule ekuseni ngovivi ngoMsombuluko.
Ujenene wezinkanyezi ezine osethathe umhlalaphansi kutholakale ukuthi une-multiple myeloma, ngokusho kwemibiko yabezindaba, uhlobo lomdlavuza wegazi ovimba amandla omzimba okulwa nezifo.
UColin Powell wasebenza njengosihlalo we Joint Chiefs of Staff, isikhundla esiphakeme kakhulu kwezempi eMnyangweni Wezokuvikela wase-US, ngaphansi kukaMongameli uGeorge HW Bush, futhi wayengumuntu omncane kunabo bonke futhi waba ngumuntu wokuqala wase-Afrika ukuphatha leso sikhundla.
UPowell waze wabizwa ngokuthi uzoba ngumongameli wokuqala omnyama wase-US, ngemuva kokuduma kwakhe kulandela umkhankaso oholwa yi-US wokulwa nokuhlasela kukaSaddam Hussein eKuwait ngo-1990.
Kamuva wakhonza njengoGeorge W. Bush wokuqala UNobhala Wombuso futhi, ngaleso sikhathi, waba yisikhulu esisesikhundleni esiphakeme somphakathi esimnyama. Ngo-2003, uPowell wenza icala labaphathi bakhe lokuhlasela i-Iraq kwiNhlangano Yezizwe, ecaphuna ubuhlakani obuyiphutha bokuthi umbuso kaHussein weBa'athist wawugcina izikhali zokubhubhisa abantu abaningi.
Esithombeni manje, ubephethe isitsha esiyimodeli se-faux anthrax phambi kwe-UN General Assembly, kodwa uzokwamukela lo mcimbi "njengothintekayo" kwirekhodi lakhe. Okwalandela kwaba yimpi yeminyaka eyisishiyagalombili eyonakalisayo.
Kulinganiselwa ukuthi abantu base-Iraq abangaphezu kwesigidi balahlekelwa yimiphefumulo yabo ngenxa yalolu dlame noma ngenxa yokuswela okwabangelwa ukuhlasela, futhi izinkulungwane zamasosha aseMelika zashona ngesikhathi kwenziwa i-US e-Iraq. Umphumela walokhu kuhlasela kwaholela odlame lwamahlelo nokwanda kwe-Islamic State (IS, eyayiyi-ISIS phambilini).
UPowell wadumala ngokuya kweqembu lakhe ngakwesokudla waze wasekelwa esidlangalaleni Barack Obama emzameni wakhe wokuba ngumengameli.
UPowell uphinde wavuma ukuthi uJoe Biden uzongenela ukhetho lokuhola izwe, wathi uzoba “ngumongameli sonke esizoziqhenya ngokushayela indesheni.”
UPowell unezingane ezintathu futhi ushiye umkakhe, u-Alma, amshada ngo-1962.